Xero qaxooti oo bam gacmeed la dhigey iyada oo Säpo ay dusha kala socotay ciddii falaysay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xeradii qaxooti ee Lilleby ee miinada la dhigey. sawir: Daniel Öhman/Sveriges Radio
Xero qaxooti oo bam gacmeed la dhigey iyada oo Säpo ay dusha kala socotay ciddii falaysay
La cusbooneeyay onsdag 7 mars 2018 kl 13.15
La daabacay onsdag 7 mars 2018 kl 11.07
Laanta wararka Ekot ayaa maanta shaaca ka qaaday in iyadoo ay ciidammada nabadsugiddu ey dusha ka ilaalineyaan rag aaminsan fikradda naaziga ey bambo dhigeen xero qaxooti oo ku taal Göteborg. Mid ka mida raggan aaminsan mabaadiida naasiga ayaa horey looga shaki qabey iney galeen denbi bambo.
Bishii diseember 2016 ayuu ciidanka sir-doonk Säpo oo daba-gal ku hayay hoggaamiyaha ururka xagjirka naaziga ee nawaaxigaa Viktor Melin iyo mid kale oo ururka xubin firfircoon ka ah. Iyadoona mid ka mid ahaa raggan bambada dhigay xerada qaxootiga DNA-giisa laga helay bambo ku qaraxday dibedda gole ku yaala bartamaha Göteborg. Golahaa waxa isticmaalayey koox taabacsan mabaadiida dhanka bidix.
Maxkamadda dacwadda ee dembiga qaadaysay ayuu mid ka mid ah saraakiishii ciidanka nabadsugidda ee Säpo ka sheegay:
-Waxaan ku jiray gaarigii ugu dhowaa gaariga ugu dhowaa ee gaariga laga hadleyo.
Waxay ka tageen faras magaalaha Göteborg iyagoona u jiheeystay waddada Torslanda iyo nawaaxiga Lilleby oo ay ku taalay xerada qaxootigu.
-Kolkii ey ku leexdeen dhabbada aadda xerada qaxootiga ayaan go’aansaday inaan ka weecdo.
Viktor Melin ayaa horay loogu tuhunsanaa bam lagu qarxiyay bartamaha Göteborg, isagoona hoggaamiye u ahaa koox abaabuleeysay bannaanbaxyo looga soo horjeedo deegaannada qaxootiga.
Viktor Melin iyo asxaabtiisa waxey gaariga ku baarkingareeyeen agagaarka xerada qaxootiga iyagoona galey duur agtiisa ahaa. Hase yeeshee ey wax yar ka hor u muuqaay saraakiisha nabadsugidda iney hub la soo baxeen una diyaargaroobeen sidii ey ku isticmaali lahaayeen, sida ku xusan qoraalka maxkamadda:
” Saraakiisha Säpo ayey u muuqdeen laba nin oo ku sugnaa Lilleby oo sameeynayey dhaqdhaqaaqyo wax lagu qarinayey”
Hase yeeshee aaney ka fal-celin.
–Aniga iyo asxaabteyda shaqada waxaannu go’aansanney inaannu isku meeleeyno keeyn dibadda ku tiilay oo aannu sugno inta ey ka soo baxeyaan mar kale.
Waxey ka war dhowreen muddo saacad ah inta ey cunsuriyiintu ka soo baxeyaan duurka.
Christer Melvinsson oo ka tir-san ciidanka ammaanka ee Torslanda ayaa aad uga gilgishay kolkii aannu uga warraney wixii dhacay.
–Haddii aan anigu middaa arki lahaa, si kale ayaan uga fal celin lahaa.
Maxaad sameeyn lahayd?
–Waan ciidan wacan lahaa annagoo markiiba gaari laheyn xerada qaxootiga iyo waardiyeyaasha xerada, sidoo kale waxaannu dadka ka saari laheeyn xerada.
–Waayo halis ayey dadku ku jiraan.
Xeer-ilaaliyaha maxkamadda sare ee maamulka Mats Ljungqvist oo gacanta ku hayay baaristii dacwadda ee ciidanka nabad-sugidda ayaa sheegay inaan marnaba lala socodsiin iney naaziyiintu hub la soo baxeen.
–Shaqo kuma aanan lahayn qeybtaa.
Ma waxay ahayd in wax laga qabto?
–Haa, sida ay aniga iila muuqato. Haddii ey muuqdaan shakhsiyaad sameeyneya dhaqdhaqaaqyo qarsoodi ah oo ka dhow xero qaxooti, waa in marka laga fal celiyo.
Gaar ahaan haddii ey xubno ka yihiin urur naazi ah?
Ekot oo xiriir la sameeysay hayadda nabad-sugidda säpo, hasye yeeshee wax jawaab ah aan ka helin.
Habeen-nimada uu falkani dhacayo, sannadkii cusbaa ee 2016/2017 ayaaney wax xabad ahi ka dhicin keeynta. Hase yeeshee saddex toddobaad dabadood laga heley xerada qaxootiga miino guri lagu soo sameeyey oo lagu tiiriyey derbi guryaha ka mid ah.
Naiib wanaag ma aaney qarxin iyadoona Viktor Melin iyo laba kale oo ka tir-san ururrada nasiizmada loo xukumey falkaa.